मस्तिष्कमा परिवर्तन ल्याउने अचूक अस्त्र &#039;ध्यान&#039; | Drishya TV
मस्तिष्कमा परिवर्तन ल्याउने अचूक अस्त्र 'ध्यान'
मंगलबार, २७ बैशाख २०७९, ०८ : ११ मा प्रकाशित
वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा. कैलाश भण्डारीको विपश्यना ध्यान–यात्रा
डा. कैलाश भण्डारीले स्वास्थ्य सेवामा समय बिताएको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जनको हैसियतले उनले कैयौं बिरामीको उपचार गरिसकेका छन् । नेपाल अर्थोपेडिक हस्पिटलमा डा. भण्डारीले सेवा सुरु गरेको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रणी नेता स्वर्गीय मदन भण्डारीका सहोदर भाइ रहेका डा. भण्डारीको आध्यात्मिक पाटोबारे सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । सानैदेखि कम्युनिस्ट माहोलमा हुर्किएर त्यही सर्कलमा बढी घुलमिल भए पनि केही वर्षयता उनीभित्रको आध्यात्मिक बीज अंकुरित हुँदै आएको छ ।
विभिन्न गुरुहरुको सत्संगमा ध्यान–साधनाको अभ्यास सुरु गरेका डा. भण्डारी पछिल्लो समय भने विपश्यना ध्यान–साधनाको प्रखर अभ्यासकर्ताको रुपमा परिचित भइसकेका छन् ।
पटक–पटक विपश्यनाको दसदिने ध्यान शिविरमा सहभागिता जनाएका उनले अन्य लामो अवधिका शिविरमा पनि सहभागिता जनाइसकेका छन् । हरेक दिन बिहान र बेलुका १–१ घन्टा विपश्यना ध्यानको अभ्यास गर्दै आएका डा. भण्डारी ध्यानले मानिसलाई सचेत र जागरुक जीवन जिउन मद्दत गर्ने धारणा राख्छन् ।
ध्यानको अभ्यासले आफ्नो चिकित्सकीय कार्यलाई समेत मद्दत गरेको उनको भनाइ छ । ध्यानको नियमित अभ्यासपछि ममा निक्कै परिवर्तन आएको छ, मकहाँ आउने बिरामीलाई केवल उपचार मात्र होइन, करुणा र मैत्रीभावले हेर्ने गरेको छु । यस्तो कुरा ध्यानले नै सिकाएको हो, उनी भन्छन् ।
आफ्नो आध्याति्मक यात्रा र विपश्यना ध्यानबारे डा. भण्डारीले दृश्य टिभीमार्फत् आफ्ना अनुभव बाँडेका छन् :